Imikhiqizo ye-TSL Ibonisa Ukubuyekezwa ku-Audio Monitorin Solutions kanye Namasistimu Okulawula Wokusakaza ku-NAB NY 2019 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-TSL Imikhiqizo Ekhombisa Ukuvuselelwa Kwezixazululo zayo ze-Audio Monitorin Solutions ne-Broadcast Control Systems e-NAB NY 2019
I-TSL Imikhiqizo Ekhombisa Ukuvuselelwa Kwezixazululo zayo ze-Audio Monitorin Solutions ne-Broadcast Control Systems e-NAB NY 2019
ENew York, ngo-Okthoba 7, 2019 - Imikhiqizo ye-TSL, umklami oholayo kanye nomenzi wezisombululo zokusakaza kokuhamba komsebenzi, uzofaka umnikelo wawo wakamuva wokulawula nokulawula e-NAB NY 2019 (I-Booth N155). Uhlobo luqhubeka nokushintsha izisombululo zalo ukuze luhlangabezane nezidingo ezishintshayo zamakhasimende alo kanye noguquko olubhekise ekuhambeni komsebenzi kwe-IP. I-TSL izogqamisa izibuyekezo ekunikezelweni kwayo komsindo, kufaka phakathi iplatifomu yayo ye-SAM-Q, PAM-IP nemigqa yayo ye-MPA1. Ngaphezu kwalokho, izokhombisa izibuyekezo ezinhlinzekweni zayo zokulawula ukusakazwa okuthuthukile kanye ne-IP Control Buddy yayo, uhla lwamaBhokisi we-Anywhere Interface kanye nezibuyekezo ze-Flashboard.
I-TSL izophinda ifake izibuyekezo emugqeni wayo we-PAM-IP nokusebenza kwayo okwedlulele ngaphandle kokuqapha komsindo nevidiyo. I-PAM-IP iyaqhubeka nokusetha indinganiso yama-2022-6 nabaqaphi bomsindo be-2110. Ukusebenza kwayo kubandakanya ukukala kokuzwakalayo, ukulinganisa okulungiselelwe ngokuphelele kanye nokuqapha kwesiteshi esiningi. Ukubona ukubaluleka kokulawulwa kwamadivayisi okuqinile ngaphakathi kwengqalasizinda ye-IP, amakhasimende manje angazikhethela i-'In-Band 'noma' Out-of-Band 'ukuze alawule nabaqaphi bawo bomsindo be-PAM-IP. Ngokusebenzisa uhlelo lwe-TSL noma i-3rd lokulawula iqembu, ukubhaliswa kwe-ST-2110 kanye ne-ST-2022-6 multicast subscript ku-PAM-IP manje sekunganqunywa kusetshenziswa umthetho olandelwayo we-Ember +, NMOS noma we-TSL. Okunye ukukhonjiswa ku-NAB NY kuzoba ukukhishwa kwakamuva kwebanga lokulalelwa komsindo kwe-MPL ye-MPA1 kufaka phakathi ukuphuculwa komsindo womsindo we-MPA1-SOLO-MADI ne-MPA1-SOLO-DANTE, neminye imiqondo yephaneli yangaphambili ye-MPA1-MIX-MADI. Ububanzi bunikezela ngamakhono wokulawula athuthukisiwe nge-SNMP wabo bonke abaqaphi bomsindo be-MPA1. Lezi ziqapheli ezinokwethenjelwa nezinomshini zinika amandla abasebenzisi bokugcina ukuqapha umsindo ngokuzethemba futhi ekujuleni kwe-100mm, balungele ukusetshenziswa kwezindawo lapho isikhala sikhona, njengamaphakethe ezindiza namaloli we-OB.
Ngasohlangothini lokulawula, i-TSL izokhombisa imisebenzi emisha ehlukahlukene ngaphakathi kokulawulwa kwe-master, playout kanye nokudlulisela njengengxenye yeminikelo yayo yokulawula ethuthukile ngenxa ye-Flex Network ye-TSL, enikwe amandla yi Ukulawula kwe-DNF. Lokhu kubuyekezwa kufaka ukuhlanganiswa kwe-MOS ne-ENPS nama-iNews ukwenza lula ukwenziwa kwe-automation yokukhiqiza izindaba ngokuvumela abasebenzisi ukuthi basebenzise amadivaysi abucayi abaxhomekeke kuwo. Ngokuzenzakalelayo kwe-playout, amakhasimende manje angabiza imali ngokuphumelelayo futhi kalula adale amasistimu wokuqalisa noma wokusekelayo / wesikhungo esisezingeni eliphakeme, ngokulawula okulula nokuthembekile kumadivayisi we-video ne-playout wohlelo bukhoma. Ngokwengeziwe, abasebenzisi manje bangaphatha, bashintshe futhi basabalalise imiyalo ye-SCTE ngesandla noma ngokulawula okuzenzakalelayo ngokubheka kwesikhathi sangempela nezaziso uma umcimbi wenzeka.
I-TSL izophinde igqamise uhla lwezindawo ezintsha zokulawula ezisezingeni eliphezulu kanye nezindawo zokuxhumana, kufaka phakathi i-IP Control Buddy, kanye nomugqa wayo we-Anywhere Interface Boxes (AIBs). I-IPL Buddy Buddy ye-TSL iyisistimu enamandla kodwa ecophile elawula noma iyiphi i-GPI / O-, ine-serial kanye ne-IP-activised device. Ibala kusuka enkombeni eyodwa kuya kwezine, i-IP Control Buddy ingenza isenzo esilula se- / on / off'-style noma ibangele ama-salvos ayinkimbinkimbi, futhi usayizi wayo we-compact uyenza ilungele imisebenzi ye-flyaway kits nemisebenzi yokukhiqiza esheshayo. Uchungechunge lwenkampani lwe-AIB lwenzelwe ngqo imakethe yezokusakaza ye-A / V, umsakazo, yezimboni kanye ne-TV, futhi ivumele abasebenzisi ukuthi basebenzise izinhlelo futhi bafeze ukusebenza kahle ngaphandle kokwenza uhlelo oluthile. Ukulawulwa kwedivayisi nokuguquguquka kokuguquguquka, ama-AIBs anikela nge-16 GPI / Os nezindlela eziningi zokulawula amadivaysi, nge-AIB-4 futhi enikezela nge-Ethernet, i-2-way DTMF nemodi yokudayela. Ama-AIBs athutha ama-GPI nama-On-Air tallies aye esigangeni, nomaphi lapho uwadinga khona - kuyo yonke imizi, izifundazwe nakwamanye amazwekazi - ukude. Ukucushwa kwanoma yiluphi uhlelo lokulawula nokubheka uhlelo lokusebenza kwenziwa lula ngesiphequluli sewebhu 'se-programmer-free'.
Ngaphezu kwalokho, inkampani ibona isidingo esikhulayo samakhasimende sokubona ulwazi olubucayi bokuhamba komsebenzi futhi iklame iFlashBoard ukuze ihlanganiswe ngaphandle komthungo ne-TSL noma olunye uhlelo lokulawula lweqembu lesithathu. Ku-NAB NY, i-TSL izokhombisa ukungezwa kwezici eziningana kusibonakaliso seFlashBoard, kufaka phakathi uhlelo olusezingeni eliphezulu namawashi omhlaba, isikhathi sokukhiqiza esibheke phezulu, inkomba yokukhanya emoyeni ne-cue, uphawu lomkhiqizo kusikrini, ukubonwa kokuqukethwe okusekelwe kuwebhu namathayili wevidiyo .
Mayelana Imikhiqizo ye-TSL
Eminyakeni engaphezulu kwe-30, i-TSL isebenze ngokuqondile nabasakazo abahamba phambili bomhlaba kanye nabadali bokuqukethwe ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa imikhakha yezixazululo zemisebenzi yokusakaza eyenza lula ukwenza imisebenzi ngaphakathi kwezokusakaza kwethelevishini, ikhebuli, satellite, I-IPTV kanye nezimboni ze-IT. Okukhethekile ekuqaphelweni komsindo, izinhlelo zokulawula ukusakaza nokuphathwa kwamandla, i-TSL iqinisekisa ukuthi izixazululo zayo zanelisa futhi zidlulele izidingo zezohwebo, ezobuchwepheshe nezokusebenza ezikhona emisebenzini ye-IT-based futhi yendabuko ukusiza amakhasimende ayo ahlasele izindleko, ukukhiqiza imali nokuhlehlisa imisebenzi.
Audio Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Control System I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ukuhlanganiswa ip MPA1 I-NAB NY 2019 Amaloli angaphandle asakaza I-PAM-IP I-SAM-Q Ama-spears nama-Arrows Imikhiqizo ye-TSL Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo Isebenza kahle	2019-10-07
Ngaphambilini: I-Telestream Showcases yakamuva Lineup yemikhiqizo kanye nezinsizakalo kusuka ku-Inched ukuya ekuhanjisweni okuqinisekiswe ikhwalithi ku-NAB NY
Olandelayo: I-RBS Ikhetha Amasistimu wePebble Beach we-automation Kuzo zonke Iziteshi